Rikoooo.com - Tsy mametraka ny installer? P3Dv3
Tsy apetraka ve ny installer? P3Dv3
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Rhodaf » 25 Des 2018, 22:41
Vao nisoratra anarana sy nisintona ny rakitra Boeing 737-800 ary nandeha namaky ny fizotran'ny installer fa tsy hita na aiza na aiza ao amin'ny "Sim Objects / Airplanes" izay Boeing. Inona no tsy mety ataoko?
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by rikoooo » 28 Des 2018, 20:13
Azonao omena ahy ve ny rohy amin'ity add-on azafady, manana 737 maro nampiantrano anay ao amin'ny Rikoooo izahay.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Rhodaf » 29 Des 2018, 01:14
Jet2.com Boeing 737-800 Jet2.com Package .... Manana aho P3D v3 ary nihazakazaka ny installer misy zon'ny Admin, nandeha nametraka ny fiaramanidina ary tsy nisy na inona na inona, ka zahao ny fiaramanidina SimObjects ary tsy misy !!
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by rikoooo » 29 Des 2018, 02:08
Heveriko fa tsy 'nifantina' ianao P3Dv3 ho toy ny simulator mandritra ny fametrahana.
Tsy maintsy misafidy ny voaomana 3D v3 ianao mba hahafantarana ilay auto-installer aiza no handika ireo rakitra.
Manandrama indray ary manavao ahy.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Rhodaf » 29 Des 2018, 19:58
Tena hendry ianao ... ary moana be aho !! Nampiasa ny toerana mandeha ho azy aho ary namorona an FSX ao amin'ny Microsoft Games. Ka tamin'ity indray mitoraka ity dia nisafidy ny boky fampianarana aho ary nisafidy ny P3Dtoerana v3 sy bingo !! Misaotra amin'ny faharetana sy ny fanampianao. Ny tsara indrindra ho an'ny taona 2019!
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by rikoooo » 12 Jan 2019, 04:05
Misaotra anao mamaly Raha ny mahazatra dia ny auto-installer-auto-mamantatra ny P3Dv3 toerana misy anao izao, amin'ny manaraka dia tsy mila misafidy fametrahana manokana ianao, misafidiana fametrahana automatique fotsiny ary zahao ny boaty Prepar3D v3 avy amin'ny lisitra simulator.
Sambatra ny sidina ary tratry ny taona